IMARA.EARTH bilowga oo cabiraya saameynta deegaanka - Geofumadas
Maarso, 2021 Cartografia, cadastre, Geospatial - GIS
Qormadii 6-aad ee Majaladda Twingeo, waxaan fursad u helnay inaan wareysano Elise Van Tilborg, oo ah aasaasaha IMARA.Earth. Bilaabashadan Dutch-ka ah ayaa dhowaan ku guuleysatay Tartanka Planet ee Copernicus Masters 2020 waxaana ka go'an adduun waara iyadoo loo marayo isticmaalka wanaagsan ee deegaanka.
Hal ku dhigoodu waa "Muuji saameyntaada deegaanka", waxayna ku sameeyaan iyada oo loo marayo xogta durugsan sida sawirada dayax gacmeedka iyo ururinta macluumaadka goobta si loo helo macluumaad ujeedo ah qorsheynta, kormeerka iyo qiimeynta mashaariicda dib u soo celinta dhulka. Su'aalaha qaarkood oo ka dhex muuqda wareysiga waxay ku bilaabanayaan hubin la'aan Waa maxay Imara.Earth? IMARA.ear, oo macnaheedu yahay xasilloon, xoog leh oo adag Sawaaxiliga, wuxuu ku takhasusay tirinta saameynta deegaanka iyadoo loo marayo farshaxanka sheekada si loogu suurtageliyo qorshaynta mashruuca adag, kormeerka iyo ka warbixinta.
IMARA maahan shirkad shirkad isgaarsiin fog wax ka yaqaan.
IMARA.Earth iyo sida loogu baahan yahay abuuritaankeeda. Elise iyo kooxdeeda waxay faallo ka bixiyeen inay ogaadeen xaddiga xogta laga heli karo ururada iyo in aan si sax ah loo isticmaalin, iyadoo laga faa'iideysanayo 100% kartideeda. Sababtaas awgeed, waxay go'aansadeen inay abuuraan shirkaddan si loogu daaweeyo xogta ku jirta heerarka kormeerka iyo qiimeynta, marka lagu daro ka mid noqoshada sawirrada si loo soo saaro macluumaad deegaan oo dhammaystiran oo ujeeddo leh.
Elise waxay noo sheegtay in mid ka mid ah waxyaabaha ku dhiirrigelinaya abuurista IMARA ay ahayd fikradeeda ah in xogta juqraafiyeed loo isticmaalo in lagu taageero mashaariicda xoojinaya mustaqbalka waara ee dhulka. Iyada iyo aasaasaheeda Melisa waxay baranayeen barashada Caalamiga iyo Maareynta Biyaha, oo markii dambe lagu dhammaystiray shahaadada Master-ka ee GIS iyo Sensing Remote,
Sawirrada oo ay weheliso macluumaadka dhabta ah ee dhulku waxay horseedayaan aqoon iyo tiro iyo macluumaad ujeeddo leh inta lagu jiro qorshaynta, kormeerka iyo qiimeynta mashaariicda dib u soo celinta dhulka.
Sida shirkadaha kale, masiibada ayaa saameyn ku yeelatay waxqabadyadooda wax yar, laakiin waxay sidoo kale heleen qaabab kale oo ay ku sii wataan, iyada oo lagu darayo dadka maxalliga ah shaqada goobta iyo adeegsiga aaladaha aqoonsiga dalwaddii. Dhammaan waxyaabaha kor ku xusan waxay keeneen kormeer iyo qiimeyn si caddaalad ah u ballaaran taasoo keentay xaalad hodan ku ah shirkadda. IMARA waxaa ka go'an inay dib u soo celiyaan meeraha, kor u qaadista howlaha dib u soo celinta iyo go'aaminta saameynta waxqabadyadan iyagoo isku daraya macluumaadka dhabta ah ee ka socda dhulka iyo xogta durugsan.
Dareenka fog ayaa lagu caddeeyay inuu faa'iido leeyahay inta lagu jiro dhammaan wejiyada horumarinta mashruuca oo kaliya maahan in la qiyaaso saameynta kaligeed.
Waxaad ku booqan kartaa shabakadaha bulshada ee IMARA cinwaanka LinkedIn ama shabakadaada IMARA.ear inaad la socodsiiso dhammaan howlahaaga. Looma baahna in lagugu martiqaado inaad aqriso daabacaddan cusub ee Magazine Twingeo. Waxaan xusuusan nahay inaan u furan nahay helitaanka dukumiintiyada ama daabacadaha aad rabto inaad ku muujiso joornaalka. Nagala soo xiriir e-mayllada eded@geofumadas.com iyo editor@geoingenieria.com. Majaladda waxaa lagu daabacay qaab dijitaal ah -halkan ka hubi- Maxaad sugeysaa inaad soo dejiso Twingeo? Nagala soco LinkedIn wixii cusbooneysiin dheeraad ah.
Post Previous" Hore Sheekooyinka ganacsiga. Geopois.com
Post Next Robotics macquul ah oo waalanNext »